ရန်ကုန်သားတာတေ| April 18, 2012 | Hits:4,606
1 | | သင်္ကြန်ရက် မစမီ၊ သင်္ကြန်တွင်းနှင့် သင်္ကြန်ကာလအဆုံး အပြင်လောကရော အင်တာနက် လောကပါ ပွဲဆူလှသည်။ ရာသီဥတုက ပူလောင်အိုက်စပ်၊ လူတွေတရုန်းရုန်းနှင့်ပျော်ပိုက်ခြင်းငှာ မထိုက်သဖြင့် ဦးရုက္ခစိုးကား သီတင်းသီလဥပုသ်ကို မြဲသည့်နည်းတူ အင်တာနက်ရှေ့၌လည်း ကျောက်ချနေမိလေသည်။
7 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Aung Min Khoung April 18, 2012 - 6:04 pm	ဦးရုက္ခစိုးရယ် . . . ခင်ဗျားရေးထားတာ ဖတ်လို့ အရမ်းပင်ကောင်းပါကြောင်းပါခင်ဗျာ